Wayne Rooney tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Home STARS EUROPEAN Wayne Rooney tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Janoary 27, 2017
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray izay fantatry ny anarany malaza; 'Wazza'. Ny tantaranay Wayne Rooney Tantara momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analysis dia misy ny tantaram-piainana alohan'ny Fame, ny Fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Wayne Rooney tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Fiainana tany am-boalohany
Wayne Rooney toy ny zazakely
Wayne Mark Rooney AKA 'Wazza' dia teraka tamin'ny Oktobra 24, 1985, nalain'i Thomas Rooney (ray) sy Mrs. Jeanette Marie (Neny) tao Croxteth Town, Liverpool, Angleterre.
Ny ray aman-dreniny Mr sy Rooney Rooney dia olom-pirenena Irish izay nifindra monina tany Liverpool, Angleterre. Ny dikany dia midika fa i Wayne Rooney dia adala irlandana. Wayne Mark Rooney no lahimatoan'ny ray aman-dreniny.
Fanandramana nataon'i Wayne Rooney tany am-boalohany
Amin'ny maha-zazalahy teraka tao amin'ny tranon'ny katolika iray voatokana, dia notanterahin'i Wayne Rooney ny Sekoly Alahadinay sy ny Sekoly fanabeazana fototra ao St. Smithin. Taorian'ny nahazoany diplaoma, dia nanohy ny De La Salle Humanities College izy. Ny fanatrehana ny De La Salle Humanities College dia nisafidy ny lalao ho an'ny lalao baolina kitra. Izany no nitombo ny fitiavany sy ny fitiavany ny lalao ary tsy ela dia hita mandra-pahitan'i Rooney. Izy no nitarika ohatra tsara ho an'ireo zandriny lahy Graham sy John izay nanaraka ny dian-tongony.
Tsy nisaraka tamin'ny baolina kitra mihitsy i Rooney hatramin'ny fahazazany. Ny fitiavany ny baolina kitra dia voamariky ny fihetseham-pony rehefa nosamborin'ny mpitandro filaminana ny baolina kitra. Wayne Rooney dia voatery niala tao an-tsekoly nandritra ny roa andro noho ny nandondona lavaka teo amin'ny rindrin'ny laboratoaran'ny siansa. Tezitra izy satria nosamborina ny baolina kitra. Taorian'ny fampiatoana azy, dia navela hanohy ny nofinofiny tamin'ny baolina izy, tamin'ity indray mitoraka ity, tsy nipoaka tao amin'ny laboratoara siansa, fa ny sehatry ny play.
Wayne Rooney tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Ry ray aman-dreny sy rahavavy
Wayne Rooney sy Ray
Wayne Rooney mizara a fitoviana miaraka amin'ny dadany misaotra ny fisehony mahatsikaiky. Mr Thomas Rooney dia nanakaiky ny lahimatoany (Wayne Mark Rooney) nandritra ny taona nahalehibe azy. Sarotra be ny mamono an'io raim-pianakaviana io.
Ny zavatra malaza iray momba an'i Thomas Wayne Rooney (Snr) dia mitantara ny fisamborana azy.
Taona maro lasa izay, ny rain'ny Wayne Rooney dia nosamborin'ny mpitandro filaminana nanadihady fiantsenan'ny baolina kitra.
Ireo polisy, izay nipoitra tamin'ny ala maraina teo amin'ny trano 450,000 tao Wayne Snr, dia nisambotra ny dadan'i Wayne Rooney, Richie. Ny famotorana dia miorina amin'ny karatra mena nomena an'i Steve Jennings ao amin'ny Motherwell amin'ny lalao manohitra ny Fo. Nafahana izy taorian'ny nanatanterahany ny fepetra takian'ny fandoavana.
Wayne Rooney sy i Neny
Neny avy any Liverpool, Merseyside ny reniny. Ny reniny tamin'ny fotoana nanoratana dia miasa toy ny vehivavy mpanara-maso iray tao amin'ny sekoly iray izay nanatrika ny zanany lahy (Wayne Mark Rooney).
Ny renin'i Irish Descent dia teraka tamin'i Tony sy i Colette McLoughlin izay mpanao mozika taloha tany Ireland.
Jeanette Rooney Fanovàna
Amin'ny alalan'ireo fenitra tsirairay dia ny fanovana lehibe indrindra. Nandeha ny vehivavy mavesatra izay nipoaka avy eny amoron-dranomasina tao 2003.
Ny maman'i Wayne Rooney dia raisina matetika ho ny "Renim-pivelomana rehetra". Nanao fandidiana plastika indray izy taloha mba hanova ny endriky ny tarehiny, ny tratra, ny sandry ary ny tarehiny.
Androany, ny habetsahan'ny vavony dia mihena izay mamela ny sakafo tsy azo sakanana. Tsara ny manamarika fa nanao izany rehetra izany izy tamin'ny anaran'ny fanatrehana ny fampakaram-bady ny zanany 3million ho olona tsy dia lanja.
Ireto rahalahy telo mahafaly ireto no nanatrika ny sekolin 'i Lady Lady sy St. Smithin voalohany ary nilalao baolina tao amin'ny De La Salle Humanities College.
Wayne Rooney sy ny zandriny lahy (traikefa amin'ny fahazazana)
Androany, ny tontolon'izy ireo dia manasaraka.
Wayne Rooney (ankavanana) sy Graham Rooney (Ankavia)
Graham Rooney sary nalaina sary dia navela niaraka tamin'ny Wayne Mark Rooney zokiny lahy. Izy dia milalao ao amin'ny Villa Villa ao amin'ny Ligy Ligin'ny Ligy Liverpool amin'ny fotoana anoratana.
Graham Rooney dia noroahana avy eny an-dalana indray mandeha taorian'ny nandosirany in-telo ny fetra farany mba hividianana toaka ho an'ny fety. Taorian'izay dia nandrava fandraràna tao 2012 roa taona. Ny sazy dia mampiditra sanda tsara amin'ny $ 650 sy 150 ora fanompoana amin'ny fiarahamonina. Nilaza ny polisy fa "mahery setra" izy ary nandrahona ny hitory azy ireo noho ny fahadisoany tao amin'ny trano fivarotana 450,000 ray aman-dreniny tao Liverpool.
John Richard Rooney no rahalahin'i Wayne. Tahaka ny hoe 'Wayne' zokiny lahy, dia nanana asa tany aloha tany John Everton i John. Miasa ho an'i Wrexham amin'izao fotoana izao izy (toy ny tamin'ny fotoana nanoratana).
Wayne Rooney tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra -Love Life.
Wayne Rooney fitiavana tantara
Wayne Rooney, hihaona amin'i Coleen vadiny Mary McLoughlin tamin'ny taona 12 tany amin'ny tobin'ny Liverpool tao Croxteth. Tamin'ny voalohany dia namana izy ireo. Nanomboka fifandraisana tamin'ny taona 16 izy ireo, taorian'ny nandaozany sekoly ambaratonga faharoa.
Wayne Rooney Fotoam-piravoravoana
Nihanatanjaka ny fifandraisan'izy ireo taorian'ireo taona rehetra noho ny fomba fikarakaran'i Wayne Rooney momba ny fiahiana sy ny fitiavana. Wayne Rooney dia nanambara ny fitiavany ny hanoratana tsy tapaka ny fitiavan'ny poezia an'i Coleen vadiny. Taorian'ny taona nahombiazan'ny fiarahamonina dia nanapa-kevitra ny roa tonta fa hamehezana ny knot. Ny fampakaram-badiny dia natao tany Portofino, Italia tamin'ny 12 June 2008. Nofonosaina ny £ 2.5 tapitrisa ny mpivady avy any Angletera OK! gazety ho fampahalalana fampakaram-bady tokana sy sary. Taorian'ny fampakaran'izy ireo, dia nifindra tao amin'ny tranoben'ny 1.3m £ ao Formby ireo mpivady. Tahaka ny fotoan'ny fanoratana, mipetraka ao Prestbury, Cheshire izy ireo, ao amin'ny tranom-bokin'ny tranom-barotra Neo-Georgian miisa £ 4.
Wayne Rooney sy ny fianakaviana
Toy ny tamin'ny fotoam-bavaka, ny fanambadiana nataon'i Wayne Rooney dia nahazo ny zanany telo mahafinaritra.
Tamin'ny 2 novambra 2009, ny vadin'i Rooney dia niteraka ny zanany voalohany izay nomeny anarana hoe Kai Wayne Rooney.
Tamin'ny 21 May 2013, ny vadin'i Rooney dia niteraka ny zanakalahiny faharoa Klay Anthony Rooney.
Tamin'ny 24 Janoary 2016, dia niteraka an'i Kit Rooney, zanany fahatelo, i Rooney.
Ny fialan-tsasatra amin'ny fianakaviana dia ampahany mafonja sy feno fiahiana amin'ny tontolo Wayne.
Wayne Rooney tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny biography -Hair Transplant
Wayne Rooney dia nanana olana tamin'ny fitomboany. Nandritra ny famindrana volo izy fony izy 25 taona. Ny fanondranana volo dia natao tao amin'ny hopitaly Harley tao amin'ny hopitaly London ao 2013.
Wayne Rooney tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny biography -Tanora mpilalao baolina kitra.
Ny nofinofin'i Rooney ho lasa kintan'ny baolina dia nanomboka tamin'ny andro voalohany tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa raha nanomboka nilalaovan'ny baolina kitra izy.
Amin'ny maha-zatovolahy azy dia nanana tati-bolana ny tanjon'ny 72 tao anatin'ny vanim-potoana iray, izay nopotehin'ny mpampianatra Liverpool iray hafa, Gerard tao amin'ny 2010.
Rehefa sivy taona izy, dia nalain'i Bob Pendleton izy ary nangataka ny hiombona "Everton FC". Rooney dia nanatevin-daharana ny ekipa tanora ao Everton, izay nahatonga azy ho laharam-pahamehana tamin'ny 2002 tamin'ny taona 16.
Tao anatin'ny fito taona nanatevin-daharana ny ekipan'ny tanora Everton, dia nanao laharam-pahamehana tamin'ny lahateniny matihanina izy ary nahazo tanjona tamin'ny 2002.
Rooney nahazo tombontsoa nasionaly tamin'ny 19th of October 2002 fony izy lasa mpilalao lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny Ligy Premier tamin'ny taona 16 sy andro 360 raha nilalao ho an'i Everton (na dia avo roa heny aza io rakitsoratra io).
Ny tanjon'ilay mpilalao tompon-daka Arsenal tamin'ny farany dia nandresy nandritry ny minitra farany ary nahatonga ny lalao 30 tao Londres tsy nahatafiditra azy.
Wayne Rooney tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny biography -Contoversies.
Tao amin'ny 2006, Rooney dia namoaka vola $ 7 tapitrisa $ avy amin'i HarperCollins hanoratra ny autobiography, Wayne Rooney: Ny Tantarako. Ny boky dia nametraka an'i Rooney tamin'ny rano mangatsiatsiaka niaraka tamin'ny tompony teo aloha tao Everton, David Moyes, izay nanadino ny mpilalao azy noho ny fanalam-baraka. Nifanaraka ny fitsinjaram-pahefana tsy nahitam-bahaolana talohan'ny nahitana ny fitsaràna. Rooney dia nanoratra boky roa fanampiny tao anatin'ny fifanarahana nataony tamin'i HarperCollins.
Wayne Rooney tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny biography -namely tahamaina WWE SuperStar
Wayne Rooney no nandresy ny Dadan'ny taona, nametraka ny tsiky teo amin'ny kintan'ny WWE teo anoloan'ny zanany tao anatin'ity Manchester Arena feno olona ity omaly alina.
Topy Maso Eran WWE Raw yards avy amin'ny diamondra teo anelanelan'i Kai enin-taona, ny mpilalao baolina dia voatery nanao andian-tsarimihetsiky ny britanika Wade Barret. Miaraka eo amin'ny seamus mpiara-miasa aminy Seamus,
Wayne Rooney dia sahy nanafaka ilay mpikomy ary nijery azy nianjera tamin'ny tany - izay azo antoka fa nihoatra lavitra noho ny mpilalao baolina kitra Premier League dia nianjera taorian'ny fanelezana nataon'ny Wayne Rooney.
Wayne Rooney tantaram-pitiavana bebe kokoa momba ny biography -Ny biografia sy ny zava-misy hafa tsy fantatra
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpilalao baolina kitra malaza indrindra eran'izao tontolo izao, Rooney dia manana fatiantoka goavana momba ny Nike sy ny EA Sports.
Nofaranan'i Coca-Cola ny fifandraisany tamin'ilay kintana Manchester any Manchester ny 2011 noho ny fahadisoam-panantenany noho ny lazaina ho fandraisana anjara amin'ny mpivaro-tena sy ny fampiasana azy amin'ny fomba tsy misy dikany mandritra ny lalao amin'ny televiziona.
Ny vadiny Coleen Rooney dia nanome lanja ny fiainana an-trano niaraka tamin'ny zanak'i Kai sy Klay tao amin'ny fanadihadiana vaovao, Wayne Rooney: Ilay Lehilahy Taorian'ny Tanjona.
Aogositra 19, 2018
Kieran Trippier Childhood Story
Jona 20, 2018